IVilla Hansa Binz 2 amagumbi okulala iibhalkhoni ezi-2. WiFi
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguTanja
Ifulethi elihle elinamagumbi okulala ama-2, amagumbi okuhlambela ayi-2, iibhalkhoni ezi-2, iiTV ezi-3, kwiigadi ze-spa zaseBinz kunye nezinyuko ezimbalwa ukusuka kwindawo yabahambi ngeenyawo. Ziphathe kakuhle kule flethi uhambo olufutshane okanye ukuhlala ixesha elide.
"I-Villa Hansa" ibekwe ngokuzolileyo e-Elisenstrasse kwaye iphantse ibe ngumda weegadi ze-spa ze-Baltic resort yase-Binz.
Indawo ejikeleze i-Elisenstrasse iyinxalenye yendawo yesikhumbuzo. Oku kuqinisekisa ukugcinwa kokubonakala kwesi sitrato, esifakwe kwizakhiwo ezinomdla.
Yindawo yokuhlala ezolileyo kakhulu, njengoko i-Elisenstrasse isitalato esifileyo kwindawo yabahambi ngeenyawo kwaye iphela emva kweemitha ezingamashumi amathathu.
I-beach promenade imalunga nama-250 m kude, ulwandle kunye nomda woLwandle lweBaltic kuyo.
"I-Hauptstrasse" (indawo ye-promenade / yabahambi ngeenyawo) inokufikelelwa ngokulula ngeenyawo emva kweemitha ezingama-30.
Indawo enesitayile, ekumgangatho ophezulu enefenitshala ye-4 kwi "Villa Hansa" ibekwe kumgangatho woku-1 wale villa entsha yesitayela sokuhlambela, kwindawo ezolileyo nephakathi eBinz. Yayisanda kulungiswa ngoJanuwari 2021.
I-Villa Hansa idibanisa zonke iimpawu ze-stylistic ze-spa architecture kwaye kwangaxeshanye imele isakhiwo sale mihla kunye nesangoku.
Kukho amagumbi asixhenxe eVilla Hansa.
Indlu enesitayile netofotofo inamagumbi amabini okulala, ngalinye linebhedi ephindwe kabini, amagumbi okuhlambela amabini (enye inebhafu / indlu yangasese kunye nenye ishawa / indlu yangasese), indawo enkulu yokuhlala enefestile eqhubekayo ngaphambili, ikhitshi edibeneyo evulekileyo yekhitshi (kubandakanya ukuhlamba izitya). ), cable TV, CD -DVD umdlali kunye internet access (WiFi).
Ngaphaya koko kukho iibhalkhoni ezi-2 ezinefanitshala apho undwendwe lunokonwabela ixesha lalo leholide.
Ifulethi lonke lixhotyiswe ngeemfama zombane ukuze kube mnyama.
Ngaphakathi kwe-Villa Hansa kukho i-sauna yoluntu (umatshini osebenza ngemali yemali) kunye negumbi lomatshini wokuhlamba (umatshini osebenza ngemali) kwigumbi elingaphantsi.
Indawo yokupaka ehambelana nayo inokuqeshwa nge-8.50 euros / ngosuku.
Iiphakheji zelinen ezi-4 sele zifakwe ekucoceni kokugqibela. Ipakethe yelinen ibandakanya ilinen yokulala, iitawuli, iibhafu kunye neetayili zeti.
Ukufikelela kwi-Intanethi 50Mbts. ifakiwe. (LAN okanye WiFi)
Ngokuqhelekileyo sikucela ukuba ungatshayi kumagumbi okuhlala.
Le ndlu ayifanelekanga kubantwana abancinci ngenxa yetafile yokutya ephezulu enezitulo zebha!
2 amagumbi okulala amabini
Igumbi lokuhlambela eli-1 (iibhafu zeshawa) / indlu yangasese
Igumbi lokuhlambela eli-1 (iibhafu) en suite
Vula ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo
Indawo enkulu yokuhlala kunye negumbi lokutyela
Iibhalkhoni ezi-2 ezinefanitshala
Umatshini wokuhlamba wasekuhlaleni
Umnxeba (Umnxeba ophantsi waseJamani)
Ukufikelela kwi-Intanethi kubandakanyiwe (WiFi)
68 square metres yendawo yokuhlala
Imoto / indawo yokupaka umrhumo we-8.50 / ngosuku
Izinja zinokuhlawulwa (i-EUR 8.50 / ngosuku)
I-Binz yindawo yezempilo kwaye iphantsi kwerhafu yondwendwe. Irhafu yondwendwelo ngoku yi-3 EUR ngosuku ngomntu omdala. Abantwana ukuya kutsho kwiminyaka emi-6 basimahla. Izinja EUR 1 ngosuku. Amakhadi e-spa aphezu kwetafile kwaye kufuneka ahlawulwe ngemali kwisiza.
INGCACISO YAMVA: (ukusukela ngoNovemba 2021)
Umsebenzi wokwakha kwisakhiwo esinamagumbi eeholide ngoku uqala kwipropati engummelwane. Kunokucingelwa ukuba kuya kubakho ukuphazamiseka ngenxa yomsebenzi wokwakha ekupheleni kuka-2022. Ukuba kungakanani okwangoku akwaziwa.
Ukuba kukho naziphi na iingxaki ngexesha lokuhlala kwakho, ungafikelela kum okanye kumnakekeli wam nangaliphi na ixesha.